त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलका चोर कति चलाख – समावेशी
त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलका चोर कति चलाख
आइतबार, पौष ०८, २०७५ | ३:००:५७ |
काठमाडौं । चोरहरु कति चलाख भने अर्काको झोला फुटाएर सामान उछिट्याउने र अरुकै भिजिटिङ कार्ड हालिदिएर फसादमा पार्ने † त्यसमाथि विदेश जाने नेपाली पनि यति हुस्सु कि गहना गुरिया हाते झोलामा नबोकेर लगेजमा हाल्ने । यस्तो घटना देखिएको हाम्रै त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा हो । ६ डिसेम्बरको दिन । टर्किस एयरको उडान नं. ७२७ बाट दिउँसो १२ः३० बजे पोर्चुगलसम्मको यात्रा तय गर्दै थिइन्, शिवकुमारी सेनले ।
सेक्युरिटी जाँचपछि ब्यागेज कार्गोतिर गयो । तर, लिस्बन पुगेर हेर्दा सबै उस्तै, मात्र एकथान तिलहरी फेला परेन । बरु, तिलहरी राखिएको ठाउँमा पर्यटन मन्त्रालयका प्रशासन हेर्ने उपसचिव दीपक थापाको भिजिटिङ कार्ड भेटियो । शिवकुमारीले भाइ मिलनप्रतापलाई भाइबरमा उक्त कार्डको फोटो खिचेर पठाइन् । चोरले काम फत्ते गरेर आफ्नो पहिचान किन राख्थ्यो र ? तै, भिजिटिङ कार्ड नै भेटिएपछि सोधखोज त गर्नुप¥यो । मिलनले निवेदन दिए, परराष्ट्र मन्त्रालयमा । मन्त्रालयले छानवीनका लागि निवेदनसहित पठायो, विमानस्थल अध्यागमन कार्यालयलाई । त्यहाँस्थित प्रहरी टोलीले सिसिटिभी हेरेर छानवीन गर्दैछ ।
विमानस्थल कार्यालयले त्यसबेला ड्युटीमा टर्किस एयर र नेपाल एयरलाइन्सका कुन–कुन कर्मचारी थिए भनेर खोजिरहेको छ । उनले यात्रा शुरु गरेका बेला त्यहाँ कुन–कुन लडेर फिल्डमा थिए भन्ने पनि खोजी हुँदैछ । उपसचिव थापाको भिजिटिङ कार्ड कसैले हालिदिएको हो वा कुनै दिन आफैँले कुनै सन्दर्भमा लिएको भन्ने पनि यकिन हुन सकेको छैन । भिजिटिङ कार्ड भेटिंदैमा उनीमाथि नै शंका गर्ने र अनुसन्धान थाल्ने कुरा पनि हुँदैन । किनभने, भिजिटिङ कार्ड सार्वजनिक प्रयोजनका लागि मानिसले तयार पारेको हुन्छ र भेटिए जतिलाई दिनसक्छ ।
विमानस्थलको लापरवाही कतिसम्म छ भने, पुस १ गते दिउँसो ३ः४० बजे एकजना क्यानेडियन नागरिक डेनिस लेपाजले झण्डै चरेश पास गराए । सेक्युरिटी चेक गराइने तल्तिरका सबै नाका उनले सुरक्षित रुपमा पार गरिसकेका थिए । त्यसक्रममा आपत्तिजनक सामान केही भेटिएन । तर, माथिल्लो तलमा रहेको अन्तिम सुरक्षा जाँच्ने ठाउँको एक्सरे मेसिनमा देखियो, तीन किलो चरेश । सामान्यतया मिलेमतोबिना यस्तो काम हुनसक्दैन । किनभने, माथिको एक्सरे मेसिनले देखाउने त्यही कुरा तलको मेसिनले नदेखाउने प्रश्नै उठ्दैन ।